Idzi ndidzo dzese nhau uye zvakavanzika zveIOS 11 yeiyo iPhone | IPhone nhau
Idzi ndidzo nhau dzese uye zvakavanzika zveIOS 11 yeiyo iPhone
Nezuro takave ne WWDC17 uye isu tinoitevera mune yakanyanya kuomarara yeiyo yakananga muActualidad iPhone. Zvingave sei zvakadaro, kubvira 19:00 nguva yeSpanish tanga tichiedza iOS 11, imwe yehurukuro huru dzakaitika nezuro masikati. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mharidzo yacho yaive yakati rebei kupfuura zvakajairwa, takaona kuti Tim Cook akasiya zvakawanda nezve iOS 11 pane iyo iPhone.
Ndokusaka isu tasarudza kuita hombe kuumbiridza kwaunogona kudzidza zvakadzama zvese zvakavanzika izvo iOS 11 zvinovanza iyo iPhone, saka iwe unenge uchiziva zvese izvo Apple zvawakagadzirira iwe. Ngatiendei!
Usapotsa zvachose chero chinhu chatakugadzirira iwe, uye kana iwe uchiziva mamwe emabasa atinozotaura nezvawo, tora mukana weiyo index kuti usarasikirwe nechero sekondi.
1 Iyo Control Center ndiyo yekutanga yeshanduko huru
2 Shanduko kune Notification Center
3 Hapana mazita uye imwe nzvimbo yedoko
4 Diki shanduko mune graphical interface
5 Record mudziyo chidzitiro dzichikunetsa-isina
6 Kugadziriswazve kweiyo iOS App Store
7 Iyo App yeNotes inobatana nepati futi
8 Zvimwe zvishoma zvisingasviki iOS 11 maficha
9 IOS 11 Inoenderana Midziyo
Iyo Control Center ndiyo yekutanga yeshanduko huru
Control Center ndechimwe chezvikamu izvo zvakakonzera kupokana kukuru muIOS kubva payakasvika neIOS 7, zvinoita sekunge haina kugutsa chero munhu. Ndosaka chiri chimwe chezvikamu zveiyo sisitimu inoshanda zvakanyanya kufungidzirwa kuti igadziriswe kuburikidza neJailbreak. Nekudaro, kubva kuCupertino vakasarudza kugadzirisa makuhwa ese kamwechete uye zvachose, vakagadzira Rimwe-peji, rakazara rakagadziriswa Control Center. Iyo Control Center yeIOS 11 inounganidza zvese zvinodiwa mukufamba kumwe chete, uye kwete izvo chete, isu tinokwanisa kubvisa, kuisa nekugadzirisa chinzvimbo chebhatani rega rega, kune izvo isu isu tinongofanirwa kuenda kuZvirongwa> Kudzora Center.
Mumwe wevakakurumbira vanosvika panzvimbo yekudzora iri chaizvo iyo nharembozha pa / bhatani bhatani, chimwe chinhu icho vashandisi vanga vachida kwemakore. Kune rimwe divi isu tinoonekana nemapeji maviri uye angangoita ese mabhatani anoenderana zvizere neiyo 3D Kubata mabasa.
Shanduko kune Notification Center
Iyo Notification Center chimwe chikamu icho chingango batika kugadziridzwa mune yega yega yeiyo iOS inogadziridza. Vashandisi vanga vachinyunyutawo kuti marongero ezaziso kana isu tichigamuchira akawanda anogona kunge ari kupenga chaiko. Apple yasarudzawo kuparadza gakava iri nesitiroko imwechete, ikozvino Notification Center ichave neyekutanga skrini ine ichangoburwa, zvisinei, kana tikatsvedza tinokwanisa kuona zvimwe zvisina basa zvakatisvikira maawa mazhinji apfuura. Nenzira iyi tinogona kufunga izvo zvingave kana zvisingave zvakakosha kana tichitarisa nguva yatinoshandisa pazviziviso.
Ehe zvakanaka unofanirwa kujaira kushandisa iyi nzira nyowaniZvikasadaro, iwe unogona kupotsa zvimwe zviziviso, kunyangwe iwo mabhaluni acharamba achive yakajeka detector yatisina kuenda kune chimwe chinhu. Uye zvakare, iyo Notification Center yarasikirwa neBlur tonality, ikozvino inongotitaridza iyo Wallpaper isina imwezve ado.
Hapana mazita uye imwe nzvimbo yedoko
Kana isu zvino taisa akateedzana mafomu muDock, tichavaona vachiparadzaniswa zvishoma kubva kune mumwe nemumwe, asi kwete izvo chete, asi zvakare izvozvi iyo inoshanda sisitimu ichabvisa zita iri pasi pezvishandiso zvakaiswa muDock. Iri rinogona kuva danho rekutanga kutanga kubvisa (kana kutibvumidza kuzviita) rakanangisa zita riri pasi pemarogo ekushandisa, chimwe chinhu chisingabatsiri, nekuti tese tinoona mashandisirwo nelogo yavo, uye kwete nezita diki kana chiratidzo iyo Apple inoisa muIOS pazasi pechishandiso uye kuti muzviitiko zvakawanda iri kunyange kunze kwekwere kana kushaya zvinyorwa.
Diki shanduko mune graphical interface
Chekutanga pane zvese, ngatitaurei zvakanaka kune mapoinzi ekuvhara Apple yakaiswazve yakagadziriswa sisitimu yemabhawa pahukuru hwakasiyana padhuze neanoshanda iyo isingori chete yakanyanya kushomeka nzvimboasi, zviri kuwedzera kuratidza. Ini pachangu, ini ndanyanya kusununguka neiyi nyowani system. Iyo wachi nezvimwe zvese zvasarudzo pabhawa yepamusoro zvinoita kunge zvisina kana shanduko, kunze kwebhatiri, iro rinoratidza iwo iwo mavara akafanana neapo pakutanga, asi rawana chimiro chakatenderedzwa zvishoma, senge rese sisitimu inoshanda mashandiro.
Siri zvakare ane chitarisiko chitsva, achiperekedzwa ne huwandu hwemalogo akachinja muchikamu chegadziriro, senge SOS Call, uye zvirevo zvezvikamu. Mukugadzika, mhando yakati kurei yakashinga yakunda. Zviri pachena kuti Apple iri kupera zvishoma nezvishoma Blur mhedzisiro, ichipa kujeka uye kunzwisisika kumagwaro. Chekupedzisira, mune zvakajairika mazwi, iyo iOS App Store yakave neshanduko zvakare mune yayo logo uye dhizaini.
El multitasking application switch Iri rave rimwe revaya vakabatwa, ikozvino rinoshanda chaizvo, zvisinei, Handoff pazasi haicharatidzike segore diki rinoonekera, ikozvino iri rimwe bhatani rinotitaurira danho ratichaita. Kune rimwe divi, makadhi eapp maari zvidiki zvishoma uye ane mamwe mativi akakomberedzwa. Nenzira imwecheteyo, Isu tinoto taura zvakanaka kune iyo Parallax mhedzisiro mune chero basa remuchina.
Record mudziyo chidzitiro dzichikunetsa-isina
Tisati taitawo basa iri rekutora chinovhara, asi vazhinji vakashandisa Jailbreak senzira inokurumidza uye isingakundike. Farai kune izvi zvese Apple yakaisa basa nyowani rekunyora iro skrini munzvimbo iri nyore yatinga fungidziraChokwadi, bhatani nyowani iro ratinogona kuwedzera muZiviso Center rinotibvumidza isu kunyora rekodhi neinoshamisa nyore. Maitiro acho ari nyore, muZvirongwa> General> Kudzora Center isu tichawedzera bhatani «Screen Kurekodha (Screen Kurekodha mu beta)» uye kubvisa iyo Control Center tinodzvanya rekodhi bhatani, iyo nguva yatinovhara iyo Center Control ichatanga iyo kurekodha izvo zvinomira patinodzvanya yekumusoro yebhuruu bar.
Chinhu chinonakidza chakasuwa vazhinji vedu paIOS Uye izvo zvinopa chiratidzo chakanaka cheizvo Apple iri kuita neiyo inoshanda system, ichiwedzera maficha atisina kumbofungidzira kuti tingave tisina Jailberak.
Kugadziriswazve kweiyo iOS App Store
Chokwadi, Apple inotaura zvakanaka kune zvipuka zvekare uye inopa Dzose dzokera kuIOS App Store. Iye zvino tava nehurongwa hutsva pazasi nemarogo akakomberedzwa, kuruboshwe "Nhasi", kwatingaone iko kunyorera kutsva kwakatangwa uye zvidiki zvipfupiso zvemabasa avo; Padhuze neiyo eyelash inoberekwa "Mitambo", chikamu chakatsaurirwa kumitambo yemavhidhiyo yeIOS.
Iyo tabo inoberekwa "Tsvaga", iri kurudyi rwechikamu chezasi, ichiperekedzwa neiyo «Zvidzoreso» zvingave sei zvisina kudaro, kuenda kune iyo "Yakatengwa" tab. Bhatani repakati rakachengeterwa maficha, kwatinowana iko kurongeka kutsva nemakadhi. Ichave pasina mubvunzo mutengo kuchinjira kune iyi App Store itsva inosanganisira maGIF kuitira kuti tikwanise kuona nekukurumidza uye nekushandisa kushoma kwedatha ndeapi mabasa emaapplication atiri kuda kurodha pasi. Kubudirira iyo yakavandudzwa iOS App Store.
Iyo App yeNotes inobatana nepati futi
Manotsi ndechimwe chikumbiro chakaitika shanduko zhinji mumakore achangopfuura, uye nekuita zvirinani. Manotsi anoramba achivandudzwa, kuwana zvishoma kugadzirisa izvo zvinoita kuti ive yakakosha mune chero munhu iPhone. Iye zvino Chinyorwa chekushandisa chichava nacho rako gwaro scanner iro rinozoverenga nekunyora zvinyorwa zvacho. Asi kwete zvese zviripo, izvo zviripo zvinoitwa zvakagadziriswa.
Chimwe chinonyanya kushamisa ndechekuti ikozvino tinogona kusanganisira kusvika patafura Sezvauri kuona mune iyo skrini yatakasiya kumusoro uko, chokwadi, maNotes zvino achakubvumidza iwe kuronga zvemukati zvako uye zvirinani, uye iwe uchave unokwanisa kuzvigadzirisa chero kwaunoda, zvese paICloud webhusaiti uye kubva kune chero e zvishandiso zvako zvine manotsi ekushandisa, chokwadi ndechekuti isu tiri kutarisana nedanho rakakosha kuita kuti ichi chikumbiro chive chakakosha, kana chisati chavepo.
Zvimwe zvishoma zvisingasviki iOS 11 maficha
Uye hazvisi izvo chete zvataudza, iOS 11 ine zvimwe zvakawanda, pamusoro pezvakavanzika izvo zvinochengeta uye izvo zvichiri kuwanikwa. Ngatipei zvishoma roundup pane ayo ari mashoma anotyisa asi anodiwa shanduko yekuziva:
QR code muverengi zvakanyatso kubatanidzwa mukamera: Zvirongwa> Kamera> QR kodhi kuverenga
Zvinyorwa zve 32bits haichazoshanda muIOS 11
Iyo pfupi nzira yeMobile Data iripowo muZvirongwa 3D Kubata
Iyo 3D Kubata basa rechiedza ichatibvumidza kuti tipe iyo kusvika pamatanho mana akasiyana ehukuru
Iyo yekumaka yeWiFi muDirect Center inotiratidza network iyo isu takabatana nayo
Iyo yekufona yeBluetooth iri muControl Center inotiratidza iyo kifaa chatakabatanidzwa
Iye zvino yave kuwanikwa yeInternet Sharing function muDirect Center
Iyo logo yeiyo iTunes Store yava nyeredzi
Diki shanduko muApple Music
iPad (yechishanu chizvarwa)
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Idzi ndidzo nhau dzese uye zvakavanzika zveIOS 11 yeiyo iPhone
Ini ndinofunga kana ios 11. yagadzikana.Ndichasiya iphone yangu isina jailbrake.
Ini ndinongoshandisa zvekupinda mutsika muDirect Center
Uye youtube ++ kuti izvi zvinogona kuve pasina jailbrake.
Ichokwadi, ini ndinofunga kuti nezvitsva zveIOS 11, iyo Jailbreak haichadiwe. Nguva yega yega iOS inofambira mberi, ichiwedzera mikana yefekitori yaimbove inogoneka kuburikidza neJailbreak.
Kana makumi matatu nematatu mashandisirwo akamira kushanda, zvinoita kunge chidiki cheruzivo ... Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mafomu akaunganidzwa kuvaka kwakadaro, kana vasina 32-bit rutsigiro (nhasi zvingave nemutsa yezvishoma, asi pane mukana) ivo vanorega kushanda.
Jailbrake haisi yekungopopota neiyo interface, asi yekumhanyisa zvinhu mune yakasarudzika modhi iyo inokupa iwe rusununguko rwekuita chero chaunoda pane YAKO iphone.
FRDR! CH akadaro
uye iyo itsva EMOJIS ????
Pindura FRDR! CH
Zvakanaka, kudzamara vaisa mbeva yebluetooth pane ipad, ini ndinochengeta yangu Ios 9 pane iyo 12.9 ipad pro ine jailbreak uye yangu bluetooth mbeva, vanogona kutowana ios 28 kana vachida….
Ini ndaifunga kuti ndini ndega ndanga ndave kupotsa iro basa kwemakore, ndinoona izvo kwete ...
Ini handikwanise kunyatsonzwisisa kuti sei vasingabatanidzi izvi muIOS natively. Dambudziko nderekuti zvigadziriso zvinokwezva kutarisa kwangu zvakanyanya, ndosaka ndisisina Jailbreak.
Ini handina kuita jalibreak kwenguva yakareba uye ini ndinongopotsa iyo Virtual Imba, ndinovimba kuti Apple inocherekedza iyo Tweak, hongu izvo zvandinonyanya kufarira nezveIOS 11 ndeyekugadziriswa kweControl Center, yaive nguva yavo kumisa nekumisikidza data, zvakatora makore gumi nerimwe kuti zvizadziswe.
Ini ndinoriisa nemavara makuru kuti chirevo chibate pfungwa dzako, hachisi kuzoipa;)
"Center Inodzora ndiyo yekutanga yeshanduko huru"
Chingave "chekutanga shanduko huru" kana "yekutanga shanduko huru"
"Chinhu chisina basa zvachose, nekuti tese tinoona mashandisiro acho ne logo yavo"
Ini ndinonzwisisa zvaunoreva, asi ini handibvumire pachiyero chako chekusava nebasa kune chokwadi chekuisa zita rezvikumbiro, nekuti hachisi chokwadi zvachose. Ini ndine makore makumi maviri, uye ndiri munhu akasununguka uye munhuwo zvake, handina matambudziko ekurangarira kana chero chinhu uye kunyangwe saka kune mafomu andinoshandisa mazuva ese uye kuti handizive kuti anonzi chii, handiti kana ini ndichida kuziva zita racho (kune chero chinhu. eg kupa zita kushamwari)? Saizvozvo, mamwe maapplication anowanikwa kana kuvimbiswa nekuverenga zita.
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Kana zviri zveJailbreak, neangu iPhone 6… ini ndinonamira neiyo jailbreak uye mirira inotevera yeiyo iOS 11.
Pindura kuna Ahau
Ivo vanofanirwa kutove kuisa sarudzo kuti vakwanise kurekodha mafoni
Hana yako akadaro
Kurekodha kufona hakubvumidzwe zviri pamutemo mune dzimwe nyika kana zviri pamutemo kana munhu achinyatso kuziva kuti zvicharekodwa.
Pindura Hana yako
IOS 11 kusangana pamwe neTwitter, Facebook, Flickr uye Vimeo zvinonyangarika